Himalaya Dainik » वर्ष ५७ का जुँगेबहादुर कक्षा २ मा: एक हातमा लौरो, सँगै दुई नातिनी लिएर जान्छन् विद्यालय !
वर्ष ५७ का जुँगेबहादुर कक्षा २ मा: एक हातमा लौरो, सँगै दुई नातिनी लिएर जान्छन् विद्यालय !
नारायण नगरपालिका–२ भैरवटोलका जयबहादुर सुनार ‘जुँगे’ ५७ वर्षको हुनुभयो । उहाँ आफ्नै वडामा रहेको श्री खड्ग आधारभूत विद्यालयमा कक्षा २ मा अध्ययन गर्नुहुन्छ। बिहान सबेरै उठ्नुहुन्छ, अनि घरको जे काम छ सकाउनुहुन्छ् । जब ९ बज्छ उहाँ विद्यालय जानका लागि तयार हुनुहुन्छ । एक हातमा लौरो, एक हातमा कान्छो छोराको कान्छी छोरी अर्थात नातिनी, काँधमा झोला । अनि अर्की जेठी नातिनी पनि साथमा लिएर सँगै विद्यालयतर्फ लम्कनुहुन्छ । विद्यालय जाने समयमा आफ्नी श्रीमती धर्मालाई खाना पस्किन र पोसाक तयारी गर्दिन आग्रह गर्नुहुन्छ ।
श्रीमती धर्मा कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, “म’र्ने बेलामा हरियो काँक्रो ।” उमेर ढल्केका श्रीमान्को स्कूले जीवन देख्दा धर्मा अचम्म मान्नुहुन्छ । धर्मा कहिलेकाहीँ ठट्ठा गर्नुहुन्छ, “यो बूढाले कहिले पढाइलेखाइ गर्नुहोला र कहिले जागिर खानुहोला, उहाँ कसैको कुरा नसुनेर नियमित विद्यालयमा जानुहुन्छ ।” विद्यालयको पोसाकमा बिहान १० बजे नियमित राष्ट्रियगान र अभ्यासमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ । रोचक त के छ भने उहाँ स्कूलमा पुग्ने बित्तिकै सम्पूर्ण विद्यार्थी र शिक्षकहरूले ‘बाजे नमस्ते !’ भन्दै अभिवादन गर्छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीले आदर–सम्मान गर्ने गर्दछन्, जयबहादुरलाई ।
आखिर उहाँलाई ढल्कँदो उमेरमा विद्यालय जाने आशा कसरी पलायोे त ! सबैको मनमा लाग्ने कुरा यही नै हो । जयबहादुर विगत लामो समयदेखि पिसाबसम्बन्धीको बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँका भाइहरुले दुई वर्षपहिले उपचारका लागि नेपालगञ्ज नर्सिङ होममा लगे । “तीन घण्टा हराइयो”, उहाँ मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, “लेखेको कुरा पढ्न नजानेर महिलाको शौचालयमा गइयो, आफ्नो ‘बेड’ नं थाहा नपाएर अर्काको ‘बेडमा’ गइयो । डाक्टरहरु रिसाउनुभयो ।” उहाँलाई त्यहिबेला पढाइ–लेखाइ अमूल्य रहेछ भन्ने लागेछ। “त्यसैको झाँेकले भाइलाई विद्यालयमा नाम लेखाइदिन भनेँ, भाइले कक्षा १ मा नाम लेखाए र गत सालदेखि ‘खुरुखुरु’ स्कूल जान थालेँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अङ्गेजी धेरै नआए पनि नाम लेख्नदेखि सबै नेपाली ‘खरर’ पढ्न सक्ने भएँ ।”
खड्ग आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश थापा भन्नुहुन्छ, “उहाँ हाम्रो अभिभावक हो । अहिले आएर विद्यार्थी बन्दा विद्यालय परिवारमा थप प्रेरणा थपिएको छ । बालबालिकाको भन्दा स्मरण शक्ति उहाँको कम छ तर पनि उहाँले हरेक कुराहरु सजिलै स्मरण गर्नुहुन्छ । विद्यालयको शोभा बढेको छ ।” सुनापति समाचार बाट
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार २२:१९